Nolazain’ny Filohan’ny Roscomnadzor Fa ‘namindra ny lohamiliny’ ho ao Rosia ny Google sy ny Apple · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2015 5:02 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 한국어, English, Español, English
Raha nanamafy ny hankatò ny fametrahana fangitra amin'ny rakitahiriny ireo orinasan'ny aterineto sasany, tahaka ny eBay sy Viber, dia mbola manakombom-bava amin'ity raharaha ity ny mpandray anjara goavana. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Mety eo an-dalan'ny famindran-toerana ny sasany amin'ny lohamilin'izy ireo mitahiry ny rakitry ny mpiserasera ho ao Rosia ny goavan'ny teknolojia sy ny aterineto tandrefana, araka ny filazan'ny filohan'ny mpanara-maso ny haino aman-jery Rosiana antsoina hoe Roscomnadzor. Nanaparitaka ity vaovao ity tamin'ireo mpanao gazety teny amin'ny lalantsara nandritra ny dinika momba ny “Toekarena an'Aterineto”, mizotra amin'izao fotoana izao ao an-drenivohitr'i Rosia i Aleksandr Zharov, filohan'ny mpandrindra ny RuNet, saingy nilaza izy fa mbola “tsy ofisialy” ny vaovao.
“Mbola tsy namaly anay mihitsy ny Facebook sy Google,” hoy i Zharov nitanisa araka ny nolazain'ny sampam-pahalalam-baovao TASS. “Araka ny vaovao, izay mety holazainao: eto ambany, na tsy ofisialy aza, fantatray fa eo am-pametrahana fangitra ny rakitahirin'izy ireo ao anatin'ny sisintany Rosiana ny Google sy Apple.”
Raha nanontaniana raha nanaiky ny fitsipika hametrahana fangitra ny tahiry ihany koa ny Facebook sy Twitter, dia tsy manam-baovao ambara ny filohan'ny Roscomnadzor. “Tsy afaka milaza na inona na inona aminareo aho. Hoavy ny fotoana, hanaramaso azy ireo izahay ary hamantatra izany” araka ny voalaza fa nambaran'i Zharov.
Tsy dia manan-danja ny filazana farany nataon'i Zharov, satria mbola mandany fotoana anatin'ny tombatombana, tsahotsaho, sy ny fitsipahana momba ny fangitra ara-drakitahiry ao Rosia ry zareo. Na dia nanamafy amin'ny fanekena ny fiangaviana hitahiry ny rakitry ny mpiserasera aza ny orinasa sasany, anisan'izany Booking.com, ny eBay, ary ny Viber, dia mbola manakombom-bava fatratra ny mpandray anjara goavana sasantsasany.
Tamin'ny Aprily 2015, nitatitra ny masoivohom-baovao RBC fa efa voalaza ho nanaiky ny hanaraka ny fitsipika momba ny fametraham-pangitra rakitahiry ny Google, fa taty aoriana ny Google nitsipaka ny filazana ary niteny tamin'ny Global Voices fa “tsy marina” izany tatitra izany.
Tamin'ny Septambra 2015, nitatitra ny haino aman-jery Rosiana fa efa nikoy teo anoloan'ny fangatahan'i Rosia ny Apple ary efa nanofa ampaha-toerana amin'ny lohamilin'ny foiben'angon-drakitra Rosiana an'ny orinasa iray antsoina hoe IXcellerate fa tsy nety nilaza ny heviny na ny IXcellerate na ny Apple tamin'izany fotoana izany.
Nanomboka nanankery ny lalànan'ny fametrahana fangitra rakitahiry tamin'ny 1 Septambra 2015, mametraka ny tokony hitehirizan'ny orinasa sy servisy an'aterineto ny rakitahirin'ny Rosiana mpiserasera amin'ny lohamilina ao Rosia ihany. Izay servisin'aterineto tsy manaraka ny lalàna dia ampidirina ao anatin'ny lisitry ny mpandika lalàna ka mety hosakanana araka ny baikon'ny sampana rosiana manaramaso ny aterineto, Roscomnadzor.
Bosnia Herzegovina 2 andro izay
Rosia 3 andro izay